ROHINGYA ARAKANESE REFUGEE COMMITTEE: 09/01/2011 - 10/01/2011
200,000 Rohingya refugees languishing in Pakistan
Shirin Ebadi, the first Iranian and the first Muslim woman to have received the Nobel Prize wrote in her book ‘Iran Awakening’ [ Page 78 ] :
‘But once it became clear that the war [ Iran-Iraq War ] would drag on, that Saddam would use chemical weapons and get away with it,awise stratum of people started to leave..Some managed to obtain visas and boarded planes. Hundreds of thousands of others, desperate to get out at any cost, paid bandits to smuggle them through Turkey or Pakistan’.
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 10:28 PM No comments:
ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာအကြောင်း တစေ့ တစောင်း
ဘလောဂ့်စာမျက်နှာတွေမှာ ရာသီစာလိုဖြစ်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို ကျွန်တော် နားလည်
ကျွန်တော်ရဲ့ မေးလ်ထဲကိုလည်း ၂ ရက်ကို တစ်စောင်နှုံးနဲ့ ၀င်လာတဲ့ ရိုဟင်ိဂျာအကြောင်း
ဖော်ပြအသိပေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ ပလူပျံနေအောင်ဝင်တာလည်း တစ်ကြောင်းပေါ့ဗျာ။
အမှန်တစ်ကယ်တော့ ဒီပြဿနာဟာ နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရရဲ့ သဘောထားများတင်းမာလွန်းလို့
ဖြစ်နေကြရတာပါပဲ ။ ရိုဟင်ဂျာဟာ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ လူမျိုးစုတွေထဲက
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ လာအိုနိုင်ငံ ၊ တရုတ်နိုင်ငံ ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊
ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနိုင်ငံတို့နှင့် နယ်နမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတခုပါ ၊ ဒါကြောင့် နယ်နမိတ်ခြင်း
ထိစပ်နေတဲ့ နယ်မြေဒေသတွေမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ လူမျိုးစုတွေရဲ့ ပြဿနာဟာ အနဲနဲ့အများဆို
သလို ရှိတက်ကြပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူမျိုးစုများဖြစ်ကြတဲ့ ရှမ်း ၊ ကယန်း ၊ မွန် ၊ ကရင် ၊ ပဒေါင် စတဲ့ လူမျိုးစု
တိုင်းရင်းသားများကို ထိုင်းနိုင်ငံဟာ လည်းကောင်းတို့ရဲ့ မျိုးနွယ်စုများအဖြင့် လက်ခံကြ
သလိုမျိုး တရုတ်နိုင်ငံကလည်းပဲ ကချင် ၊ ရှမ်း ၊ အခါ ၊ လားဟူ ၊ လီရှော်တိုင်းရင်းသားများကို မျိုးနွယ်စုများအဖြင့်လက်ခံကြတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းပဲ ချင်း ၊ နာဂ ၊ လူမျိုးစုများကို သီးခြားပြည်နယ်သားများအဖြင့် လက်ခံ
ကြပါတယ် ၊ ဒါဟာ နယ်နမိတ်ခြင်းထိစပ်နေတဲ့ နိုင်ငံများရဲ့ အစိုးရများ၏ ပျော့ပျောင်းတဲ့
ရိုဟင်ဂျာရဲ့ မူလဇစ်မြစ်ဟာ တောင်အာရှနိုင်ငံတခုက အိန္ဒိယနွယ်ဖွား အစ္စလမ်မစ်ဘာသာ
၀င်တွေပါ ၊ ဒါပေမယ့်လည်းပဲ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကို ရှေးဦးခေတ်တွေကတည်းက တိုင်းတပါး
စစ်တပ်များအဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ကုန်သည်များအဖြင့်လည်းကောင်း ၊ သာသနာပြုများအဖြင့်
လည်းကောင်း ၀င်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြတာဟာ နှစ်ပေါင်း ရာချီနေခဲ့ကြပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများအရ တချို့တွေက ယာယီဧည့်နိုင်ငံသားလက်မှတ်
နိုင်ငံသားသတ်သေခံလက်မှတ်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ ခံယူခွင့် ရှိကြတဲ့လူများလည်းဖြစ်ခဲ့
သို့သောလည်း အိန္ဒိယနွယ်ဖွား ဘာသာခြားများက နိုင်ငံတော်ရဲ့ မူလရင်းမြစ်ပေါက်ဖွားလာတဲ့
တိုင်းရင်းသားစစ်တွေတော့ မဟုတ်ကြပါဘူး ။
ဒါကြောင့် ရိုဟင်ဂျာဆိုတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်တယ်လို့ မပြောနိုင်သလို ၊ မဟုတ်ဘူးလို့
လည်း ငြင်းလို့မရပါဘူး ။
ဒီ့ထက်ပိုပြီး အရေးကြီးတာက ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီ ဘတ်တော်သားတွေရဲ့ ဦးတည်ရမယ့်
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ( Goal ) ကို လမ်းမချော်အောင် ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကိုရှေ့တန်းမတင်ကြ
ဒါကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ ပြဿနာ တစိတ်တပိုင်းအပေါ် ပုဂ္ဂလိက အမြင်ပါပဲ..
အမြင်မတူခဲ့ရင်လည်း ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာဖြင့် ၀င်ရောက်မှတ်ချက် ပေးဆွေးနွေး
Source: MaungNaing Blog
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 2:56 AM No comments:
A Fresh List of Rohingya Refugee Detainees in Malaysia
A fresh listof undocumented Rohingya Burmese refugees, who were arrested by the Malaysian authorities under the country’s legal framework for their undocumented status. They are being detained at Juru Immigration Detention Camp and hence they are very much in need of UNHCR intervention to get release from the detention before reaching to further prosecution.
Imprisoned for6months in Pukusana jail
Sun, 2011-09-25 13:41 — editor
2. Analysis: The Land and the Indigenous People of Arakan
To incite violence and bigotry against Rohingya Muslims of Arakan, Khin Maung Saw does not waste any time. He starts withapicture ofaMuslim congregational prayer on the front page, followed byaphoto of some soldiers (or possibly guerillas) sitting on the ground. The connotation is quite obvious.
However, such fear-mongering tactics will not succeed and would only lay bare the hideous character of their accusers, as it did in Norway. After all, of all the various communities that call Arakan their home, it is the Rakhine Maghs of Burma that have continued to practice violence; they wanta‘free’ Arakan away from the no less monstrous military brutes of Burma, while still purporting to retain its racist, non-democratic and fascist character that does not allow integration and multi-culture.
Also Read: Letter from America: Muslim Identity and Demography in Arakan
Source- Asian Tribune
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 6:57 AM No comments:
Letter from America: Muslim Identity and Demography in Arakan Part-1
In this post-9/11 era of hatemongering and Islamophobia, it is not difficult to understand his evil mindset that steered him to concoct such an absurd idea that the Rohingya Muslims are working towards Islamization of Myanmar (Burma). Forget about the fact that Burma isamilitary-ruled country with no democracy, how couldamere2to3million people impose the dictates of their faith onanation of 50 million, especially when they are denied all basic rights – of movement, assembly, marriage, education, jobs, etc.? One has to be either mentally unstable or very high in mind-altering drugs to hallucinate suchaludicrous idea!
These demented and paranoid Theravada Buddhists of Arakan, often masquerading as intellectual voices of their community, are no democrats and surely not liberals.
They are, in fact, closet fascists. If allowed to come to power or sway policy decisions, they will, in all likelihood, borrow the pages from the hated (German) SS manual and repeat the heinous crimes of their fellow coreligionists in Cambodia. It is no accident that Saw’s mentor Aye Kyaw wrote the infamous 1982 Burma Citizenship Law that provided the blueprint for denying citizenship rights of the Rohingya people – the other dominant ethnic group of Arakan. It was done withacalculated precision to not only rob the properties of the Rohingya but also to uproot them en masse from the soil of Arakan, their ancestral home. It’s an utterly devious and devilish conspiracy.
Source- Asian Tribune -
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 6:00 AM No comments:
Severe Restriction imposed on traveling of Rohingya within the state
Mr. Habibur Rahman, President of the National Democratic Party for Human Rights (NDPHR), exile, South East Asia Regional Office in Malaysia, who is languishing 21 months in Australian detention said early this September 18 Rohingyas involving women and children were arrested in Pathien port of Irrawaddy division on their traveling to Rangoon from Akyab/Akyab city of Arakan/Rakhine state.
All of them were sent back to Akyab (Sittwe) from Pathein by ship. Firstly they were detained2days in police lock-up and released by payment after their relatives proved they are natives of Akyab (Sittwe). However two days later of released, all of them were picked up again by authorities led by Military Intelligence forces.
Despite their relatives residing in Rangoon had tried to rescue by corporation with high ranking authority by spending about one million Kyats, Akyab (Sittwe) Court sentenced them up to two and half years to seven years. I was told not to report when they are trying to negotiate with authority to get release of them.
In early July 2011, another group 38 Rohingyans mostly from (Akyab) Sittwe andafew from Kyauktaw Township were arrested by military forces in Ann township when they traveling to Rangoon. One of them was my cousin brother Abdulllah from Akyab (Sittwe). Recent contact with his mother confirmed that they been gone to missing, possibly killed.
In Yunan state of China, authority's raiding over Burmese people have been recently increased. About 200 Burmese mostly Muslims were arrested during the past two months. Generally, most of arrestees were handed over directly to Burmese authority in border regions andafew lucky were passed to border armed groups. Again, Burmese authority sent them for force labor in rail way constructions.
My brother who is living in Burma China border since 2008 was gone missing after arrested by police. Today his friend said over the phone that he was possibly taken to force labor purposes.
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 1:32 AM No comments:
Malaysian Government Treats Rohingya Refugees with Dignity
Government of Malaysia claims that it is treating the refugees with dignity but arrests, detention and prosecutions are still continued.
On 02/07/2011 arrested6UNHCR mandated Rohingya Burmese refugees and imprisoned with false and fabricated charges for2months on the date of 10/07/2011.
However, they were transferred to Ajil Immigration Detention Center on 12/090/2011 for further prosecution of whether deportation to Thailand or Burma where their lives will be in danger. They are very much in need of UNHCR intervention to get release of them before meeting with the danger on humanitarian ground.
Their full details are as follows:
Mohd Ayub Mohd Anuar Ali (Very sick, unable to have daily food)
(UNHCR File: 512-05C00547)
Body Number: 3318, Block No. A, Ajil Camp
Mohammad Yasin Muhammad Sadique
(UNHCR File: 354-11C01764)
Body Number: 1139, Block No. A, Ajil Camp
Muhammad Hussin Zafor Hussin
(UNHCR File: 354-09C06579
Body Number: 3320, Block No. A, Ajil Camp
UNHCR File: 354-11C01942
Body Number: 3317, Block No. A, Ajil Camp
UNHCR File: 354-11C03223
Body Number: 3316, Block No. A, Ajil Camp
Mohammed Yusuf Shakir Ahmed
UNHCR File: 512-05C01286
Body Number: 3403, Block No. B, Ajil Camp
Recently, on 21/09/2011, UNHCR Malaysia intervened to the Malaysia Immigration Department and managed to get release of 98 Refugees including some Rohingyas from the Blantik Immigration Detention Center of Kedah State, Malaysia, after continuous request from the Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC), Malaysia to which the RARC express sincere thanks to the agency.
But, some Rohingya refugees are still remained in the same detention center. Of them, the RARC managed to get some names. Their details are as follows:
Imprisoned for3months and 10 days in Pukusana jail
Imprisoned for4months in Pukusana Jail with 1 stroke of canning
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 12:45 AM No comments:
နတ်မြစ်ကို ဖြတ်ကူးသည့် လှေနစ်၊ လူ ၁၇ ဦးသေဆုံး
မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် နယ်စပ်ဒေသ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်တွင် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့သို့သွားသည့် လှေတစ်စီး နတ်မြစ်ကို ဖြတ်ကူးစဉ် နစ်မြုပ်သွားသဖြင့် ကလေးနှင့် အမျိုးသမီးများ အပါအ၀င် စုစုပေါင်း လူ (၁၇) ဦးသေဆုံးသွားကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါလှေမှာ လွန်ခဲ့သော သောကြာနေ့ ညနေပိုင်း အချိန်တွင် မောင်တောမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် ၅ မိုင်ခန့်အကွာတွင်ရှိသည့် လဘောဇော ကျေးရွာအုပ်စု ပြင်ဖြူရွာမှ ခရီးသည် ၂၂ ဦးတင်ဆောင်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ သွားရန် နတ်မြစ်ကို ဖြတ်ကူးချိန်တွင် နစ်မြုပ်သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံကျေးရွာသား တစ်ဦးကပြောသည်။
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အကြား ဖြတ်စီးနေသော နတ်မြစ်
"လှေက ချောင်းတက် ကနေထွက်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို သွားဖို့ နတ်မြစ်ကို ဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်မှာပဲ နစ်မြုပ် သွားတာ ဖြစ်ပြီးတော့ လှေပေါ်မှာ စီနင်းလိုက်ပါလာသူ ၂၂ ဦးထဲကနေ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေ အပါအ၀င် ၁၇ ဦးရေနစ် သေဆုံး သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နတ်မြစ်ကမ်းခြေအနီးနဲ့ မင်္ဂလာကြီးချောင်းအတိုင်း အလောင်းတွေ မျှောနေတာကို ဒီနေ့ထိ တွေ့မြင်ရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ၄င်းကျေးရွာသားက ပြောသည်။
သေဆုံးသွားသူများ အားလုံးမှာ မွတ်ဆလင်များ ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါလှေမှာ နစကမှ နားလည်မှုဖြင့် နယ်စပ်ကူးခွင့် ပြုထားသည့် တရားမ၀င် ကူးတို့လှေဖြစ်သည်။ လှေပေါ်တွင် ခရီးသည်များ ပြွတ်သိပ်တင်ဆောင်ထားပြီး ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့မှ စပိဘုတ်နှင့် တိုက်မိရာမှ နစ်မြုပ် သေဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နတ်မြစ်ဝရှိ ဆင်မဖြူကျွန်းမှ မြန်မာ မွတ်ဆလင် တစ်ဦးက သူကြားသိရသလောက်ကို ယခုလို ပြောသည်။
" ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့က တရားးမ၀င် လှေဖြစ်တဲ့ အတွက် ရာဘားဆေးပြားတွေ ပါလာတယ်ထင်ပြီး စစ်ဆေးဖို့ လိုက်ပါသွားစဉ်မှာ လှေနဲ့ တိုက်မိပြီး လှေက နစ်သွားတယ်။ ရာသီဥတု ဆိုးဝါးနေပြီး မြစ်ရေစီးက မြန်နေတဲ့ အတွက် ဘယ်လိုမှ မဆယ်နိုင်ဘဲ လူတွေ အကုန်လုံး မျောပါသွားခဲ့ပါတယ်။ အများစုကတော့ ရေနစ် သေဆုံး သွားခဲ့ပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
သို့သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အာဏာပိုင်များက တစုံတရာ ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားခြင်း မရှိသဖြင့် ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲကမှ စပိဘုတ်တိုက်မိ၍ လှေနစ်သွားသည်ဟု ပြောဆိုခြင်း အပေါ် နိရဉ္စရာက အတည်ပြု ပြောကြားနိုင်ခြင်း မရှိပါ။
ယမန်နေ့က ရှင်ဖြူကျွန်းခေါ် စဖိုလောင်ဒီ ဖေါင်တောတွင် ခုနှစ်သားအရွယ်ကလေး တစ်ဦး အလောင်းကို တွေ့ခဲ့ရပြီး ရဲက ဆယ်ယူကာ တက်ကနက်သို့ ပို့လိုက်ကြောင်းနှင့် တက်ကနက် မြို့နယ် မီစတရီ ခေါ် လက်သမား ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး အလောင်းတစ်လောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု သူက ပြောသည်။
မြန်မာဘက်တွင်လည်း အလောင်းနှစ်လောင်းကို ဆယ်ယူရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာ နယ်စပ် အာဏာပိုင်များက သက်ဆိုင်ရာ မိသားစုများထံ လွဲပေးလိုက်သည်ဟု ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
" ဆယ်ယူရရှိတဲ့ အလောင်း နှစ်လောင်းထဲက တစ်လောင်းဟာ မောင်တောမြို့နယ် ရွှေဇားအုပ်စု ကပ်ပကောင်း ဖြစ်တဲ့ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဆယ်အိမ်ခေါင်းတွေက တဆင့် မိသားစုတွေကို လွဲပေးလိုက်ပြီး ကျန်တဲ့ တစ်လောင်းကတော့ ဘူးသီးတောင်က ဖြစ်ပါတယ်" ဟု သူက ပြောသည်။
သေဆုံးသွားသူများ၏ အလောင်းများမှာ နတ်မြစ်အတွင်း မျောနေပြီး တချို့ အလောင်းများမှာ ကျားပါးစပ်များတွင် ကပ်ငြိနေသည်ဟု သိရသည်။
နယ်စပ်သတင်းရပ်ကွက်များ၏ အဆိုအရ မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအကြား နတ်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီး နယ်စပ်ကို တရားမ၀င်ဖြတ်ကူးနေသည့် လောင်းလှေများမှာ စက်မဲ့ လက်ဖြင့် လှော်ခတ် နေသော လှေငယ်များဖြစ်ပြီး၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဆိုသလို ရာသီဥတုဆိုးဝါးသည့် မိုးရာသီအတွင် အဆိုပါလှေများ နစ်မြုပ်ကာ ခရီးသည်များ ရေနစ်သေဆုံးမှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
လှေနစ်သေဆုံးသွားသူ အလောင်းများမှာ ယခုအချိန်အထိ နတ်မြစ်ကမ်းခြေနှင့် ချောင်းတက်များ အကြားမျောဝင်နေပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များမှ ဆယ်ယူကာ စနစ်တကျ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ မရှိသေးကြောင်း အဆိုပါ ကျေးရွာသားက ပြောသည်။
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 12:54 AM No comments:
Chris, there is something of the righteous migrant stain in you and Julia. Your interviews seen here in Asia reek of gross ignorance of the real politik of both the incessant violence, threat, lack of hope, and more importantly lack of future for their children that drives people from their homes. It seems as though you also underground network that brings people here.. the high levels political, military and police contacts, which ensures the trade will never die, only those caught in the limbo of their services ensured by the deeply corrupt nature of both Indonesia and Malaysia.
If Australia was committed to stopping the boats it might doawee bit more about stopping the wars and forms of oppression that cause them to leave, as well as refusing to participate in US resource adventurism. More importantly you could provide more DoI staff in the posts so that refugees and those who face all sorts of persecution are not forced into so called queue jumping where there simply is no queue. The deportation of the stateless Rohingyasawhile agoawasaclassic case in point.
The governments tactics remind me of the Goebbels mantra of 'tellabig lie and often' to justify your ineptitude in dealing with an ongoing humanitarian issue. Its going to get worse not better as economies and environments collapse so some decent forward thinking is needed now.. not merely reactionary dicking around. Australians are, by and large, bigger than you and your leader. Your arguments are as hollow it seems as you heart.
Read more: http://www.theage.com.au/opinion/politics/humane-reasons-for-processing-asylum-seekers-offshore-20110916-1kduh.html#ixzz1YCDjV3vK
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 1:23 AM No comments:
15 September 2011: More than 100 people rallied in front of the Burmese Embassy in London, UK to show solidarity in condemning human rights violations against Rohingyas in Burma.
In today's protest organised as part of the global action for the Rohingyas, the new government of Burma led by ex-Gen President Thein Sein is denounced for its 'baseless and concocted' allegation in the current political forum in Naypyidaw.
Tun Khin, Chairman of the Burmese Rohingya Organisation UK, said: "We are here today to condemn Thein Sein's government because the Rohingyas are accused of being 'illegal immigrants', denied rights of citizenship, and attempted to completely eliminate the whole communities through ethnic cleansing."
Speaking to Chinland Guardian, Tun Khin said: "I would like to take this opportunity to express our thanks to all the people today for their support. It is also very important that we continue to keep this sense of togetherness and work together for our country in the future."
A joint statement released today byatotal of 8 Rohingya communities worldwide called on Burma's government to immediately restore the fundamental human rights and freedom, citizenship rights and ethnic rights in the country.
The demonstration had other key speakers and representatives from Kachin, Karen, and Chin communities, and from organisations including Burma Campaign UK, 88 Generation Students, Christian Solidarity Worldwide, Burma Democratic Concern and Burmese Muslim Association UK.
Highlighting the situation in Burma, Wai Hnin Pwint Thon, whose father is still servingajail sentence as one of the many political prisoners, said: "When we talk about freedom, it is not only for one person but for all the peoples in Burma."
Chin activist, Shwekey Hoipang,aChristian pastor working asamissionary in Arakan State in the 1990s, said he eye-witnessedaseries of human rights violations, arbitrary persecution and discrimination against the Rohingyas by the military dictatorship.
The statement also urged the UN, EU, ASEAN and international communities to mount effective pressures on Thein Sein's government to cease its ongoing human rights violations against the Rohingyas, to protect their rights, freedom, and legitimate interests, and provide them necessary assistance.
It is estimated that there are about 2million Rohingyas living along the western border of Burma.
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 10:20 PM No comments:
On Sep 10, 11:04 am, Daw Khin Hla <dkh...@gmail.com> wrote:
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင်သဘာဝဘေးဒဏ်၊ နိုင်ငံရေးဘေးဒဏ်ကြောင့် လူ့အသက်ပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးသွားခြင်း၊ ခိုကိုးရာမဲ့ဘဝအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားခြင်း၊ နိုင်ငံမဲ့ဘဝအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားခြင်းတို့ကို ရင်ဆိုင်နေရပါသည်၊၊ ကျွန်မတို့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများသည်လည်း နိုင်ငံရေးဘေးဒဏ်ကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒုက္ခမျိုးစုံခံစားနေရ ပါသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတိုင်း ရိုဟင်ဂျာတွေကမြေဇာပင်ဖြစ်ရသည်မှာအစဉ်အလာကဲ့သို့ ဖြစ်နေ ပါသည်။ တရားမျှတမှုမရှိသောနိုင်ငံရေးအဓွန့်ရှည်နေသမျှကာလပတ်လုံး ရိုဟင်ဂျာများသည် နိုင်ငံမဲ့ဘဝဖြင့် ဒုက္ခမျိုးစုံ ခံစားနေရမှာဧကန်မလွဲပါ၊
ရိုဟင်ဂျာတို့သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပင် နေထိုင်ကြသူများ ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများလည်းရရှိခံစားခဲ့ပါသည်။ မြေနိမ့်ရာလှံစိုက်ဆိုသကဲ့သို့ လူနည်းစုများဖြစ်သော ရိုဟင် ဂျာများကို သာဘဂါင်္လီဟုခေါ်ဆိုသမုတ်ပြီး၊ အမျိုးမျိုးအနိုင်ကျင့် နေပါသည်၊၊
လူသားစစ်စစ်ဖြစ်ပါလျက် လူ့အခွင့် အရေးဆုံးရှုံးနေသည်မှာ ရင်နာစရာကောင်းလှပါသည်၊၊ ရိုဟင်ဂျာတို့နေထိုင်ရာဒေသသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့်ု နိုင်ငံနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသောကြောင့် ဘင်္ဂါလီဟုသတ်မှတ်ရမည်ဆိုပါကတခြားနယ်စပ်မှာနေထိုင် သောလူမျိုးအာလုံးကိုမည်သို့ သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်မည်နည်း။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်း နယ်စပ်တလျှောက် နေထိုင်သောသူများစွာရှိပါသည်၊၊ နယ်စပ်တွင် နေထိုင်သောကြောင့် တဖက်နိုင်ငံသားဟုစွပ်စွဲနေသည်မှာ ယုတ္တိ မရှိပါ၊
*ကျွန်မတို့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများသည် နိုင်ငံတော်အပေါ်သစ္စာရှိပြီး၊ နိုင်ငံတာဝန်ကိုလည်း ထမ်းဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမရှိပါ၊ မကြားဘူးပါဟုပြောဆိုနေခြင်းမှာ လိမ်လည်လှည့်ဖျားနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၆၁ခုနှစ်မေလ(၁၅)ရက်နေ့မှစ၍ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုကိုလူနည်းစုတခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလျက်ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာကိုမြန်မာ့အသံမှတပတ်လျင်(၃)ကြိမ်မှန်မှန်အသံလွှင့်ခဲ့သည်ကိုထောက်ရ­ှု လျှင်မည်သူမျှ ငြင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။*
နိုင်ငံတော်၏မူဝါဒ၊ သဘောတရားပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရိုဟင်ဂျာတို့အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးသွား ပါသည်၊၊ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများအား မောင်းထုတ်ရေးစီမံချက်အဖြစ် နဂါးမင်းစီမံချက်ကို
ရည်ရွယ်ချက် ကောင်းကောင်း ဖြင့်အကွက်ဆင်ကာတဖက်နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးသွားအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းစီမံချက် အောင်မြင်ရေးအတွက်ကြိုတင်စီမံမှုများ အဖြစ်အထောက်အထား မြောက်များစွာတွေ့ရှိနိုင်­ပါသည်။ထိုစီမံချက်၏အဓိကရည်ရွယ်မှာရိုဟင်ဂျာတို့အားနိုင်ငံမဲ့ဘဝ ရောက်ရှိ ရေးပင်ြ­ဖစ်ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာများမှာနိုင်ငံမဲ့ဘဝသို့ရောက်ရှိခြင်းနှင့်အတူသဘာဝဘေးဒဏ်နိုင်ငံသား မဟုတ်သောကြောင့် အနိုင် ကျင့်စော်ကားမှုဒဏ်၊ စားဝတ်နေရေးဒဏ်စသည့်ဒဏ်အမျိုးမျိုးဖြင့်အလူးအလဲခံစားနေရပါသည်၊၊
အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးသော လူလူချင်းညှာတာတောက်ထားပြီး စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီကို လိုလားတောင့်တနေသောဒီမိုကရေစီအင်အားစုများသည်ရိုဟင်ဂျာအရေးကိုပါဝင်ကူညီပေးမည်ဟုကျွန်မတို့ယြုံ­ကည်ပါသည်၊၊
ဆုံးရှုံးမှုသည်အောင်မြင်မှုအတွက်အင်အားတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင့်ရိုဟင်ဂျာများသည်လည်းဆက­် လက်ကြိုးစားရ ဦးမှာဖြစ်ပါသည်။ အောင်ပွဲဆိုသည်မှာလူသားတို့အတွက်သာဖြစ်ပါသည်၊၊
ရိုဟင်ဂျာအရေး ….. ဒို့အရေး
ရက်စွဲ။ ။၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလ (၁၀) ရက်။
Posted by Rohingya Arakanese Refugee Committee (RARC) at 10:52 PM No comments: